छोरी जन्मेपछि शाहिदको जीवनमा भयो ठूलो परिवर्तन - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
छोरी जन्मेपछि शाहिदको जीवनमा भयो ठूलो परिवर्तन
२७ पुष,२०७३ | Agency
छोरी मिशाको जन्मपछि अभिनेता शाहिद कपूरले आफ्नो जीवनमा पूरै परिवर्तन आएको महसुस गरेका छन् । छोरीको आगमनसँगै उनले आफू बल्ल पूर्णरुपमा सेटल भएकोे र जिम्मेदार महसुस गरेको बताए । बुवा बनिसकेपछि अरु के कस्तो परिवर्तन भईरहेको छ त शाहिदको जीवनमा ? एजेन्सीले गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै ।
बुवा बनेपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो ?
बुवा बनेपछि मेरो जीवनमा एकदमै ठूलो परिवर्तन भएको छ । म एकदमै राम्रोसँग सेटल भएको महसुस गरेको छु । हरेक पुरुषहरु जो बुवा बन्छन् उनीहरुको माईण्ड सेट नै पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
यसले तपाईँको काममा असर पारेको छ ?
छैन । यो एउटा निरन्तर चलिरहने र सिक्ने प्रकृया हो । जसबाट सही र गलत थाहा पाउने मौका मिल्छ । त्यस कारण कुनै काम फरक र उत्साह जनक छ भने म गर्छु तर केही उत्साहित गर्ने छ तर फरक छैन भने म त्यसबारेमा सोच्छु ।
कहिल्यै छोरीको डायपर परिवर्तन गरिदिनु परेको छ ?
मैलै कैयौँ फटक मिशाको डायपर फेरिदिएको छु । डायपर फेर्दा नयाँ डाईपर लगाउने काम मात्र हुन्न । पहिले पूरानो फोहोर डायपर फालेर, छोरीलाई सफा गरेर अनि मात्र नयाँ लगाउनु पर्छ । मैलै यो सबै गरेको छु ।
एक पटक तपाईँले भन्नु भएको थियो, तपाईँलाई आफ्नो बुवाले मन पराउने कुराहरु मन पर्दैनन् भनेर । यसमा अहिले के भन्नुहुन्छ ?
म आफूलाई आफ्नोे बुवाजस्तो बनाउन चाहन्न । तर मेरा धेरै कुराहरु बुवासँग मेल खान्छन् । हामीमा केही कुराहरु उस्तै छन् । मेरी आमा र मीराले मलाई तिमी तिम्रो बुवाजस्तै छौ भनिरहन्छन् ।
बलिवुड डेब्युको तयारी गर्दै शाहिदकी पत्नी
अभिनेता शाहिद कपूरकी पत्नी मीरा राजपूत आकर्षक व्यक्तित्वका कारण विवाह देखि नै चर्चामा छिन् । सायद बलिवुड अभिनेताका पत्नीहरुमध्ये विवाह ..
ऐश्वर्याको सुन्दरताले भाग्यमानी अभिशेक, करीनाको बानीले फिदा भए सेफ
शाहिदका भाई र श्री देवीकी छोरी बीच के पाक्दैछ ?
मंगेतरसँग देखिईन् शाहिदकी बहिनी सना
शाहिदले सार्वजनिक गरे छोरी मिशाको पहिलो झलक
रणवीरको पद्मावती लुक सार्वजनिक, शाहिदका भाईले गरे सुटिङ्ग शुरु– आजको बलिउड अपडेट
एक हजारोँमे मेरी बेहेना है, जमाई राजा जस्ता चर्चित सिरियलहरुमा काम गरेकी अभिनेत्री निया शर्मा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका त..
‘साहो’बाट बाहिरिईन् अनुश्का ?
बलिवुड स्टार अमिताभ देखी मनिषा सम्म जस्लाई यी रोगले सतायो
सात कक्षासम्म मात्रै पढेका जोनी यसरी बने सफल कमेडियन